आज सामान्य बढ्यो सुनको मूल्य, कारोबार कतिमा? – onlinekantipur.com
आज सामान्य बढ्यो सुनको मूल्य, कारोबार कतिमा?
८ फाल्गुन २०७८
साताको पहिलो दिन आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ। अस्ति शुक्रबार प्रतितोला ९६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज १ सय रुपैयाँले बढेको हो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९६ हजार १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। जसको मूल्य शुक्रबार प्रतितोला ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा स्थिर रही प्रतितोला एक हजार ३०५ रुपैयाँ कायम रहेको महासंघले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन तथा चाँदीका मूल्यमा हुने परिवर्तनका आधारमा यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस एक हजार ८९७ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ।
एमसीसी टेबल गर्ने शीर्ष नेताको निर्णयप्रति झलनाथ खनालको असहमति
संसदमा आजै एमसीसी टेबल हुन्छ: प्रवक्ता कार्की